တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်း, Samsung Galaxy Tab မေးအတူတူပင်မဟုတ်ပါ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်း, Samsung Galaxy Tab မေးအတူတူပင်မဟုတ်ပါ
ဇူလိုင်လ 1, 2014 osshakespeare မိုဘိုင်းဖုန်း 0
မိုဘိုင်းဖုန်း and tablet what would you choose? Physical terminal fair was held in Nanjing, today the first day of the calendar inalot of new products. Samsung က exhibition display ofasmart phone, called the Tab Q it hasa7 inch screen, Samsung GALAXY than we know Mega 6.3 little more on the big screen. Below for ZOL mobile phone business reporter filming the scene real machine ahead, you can feel this kind of big screen Android smartphone in advance.
The Samsung GALAXY Tab Q overall modelling style is the same with the GALAXY series of products, in the front is equipped witha7-inch touchscreen, level of resolution of HD, camera ways it has2million like element + 8 million pixels. Configuration of the machine with the Android 4.3 ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်, but also is equipped witha1.2 GHz quad-core processors, witha1.5 GB of RAM + 8 GB ROM memory combination, and the biggest can support 64 GB extension.
This article from the OS ကို-STORE.
Samsung ရဲ့ Galaxy
64-နည်းနည်းက Windows Technology_Internet မိုဘိုင်းဖုန်း device ကိုမော်ဒယ် OS ကို-STORE Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီပီယူ Software များ processor ​​ကို ပရိုဆက်ဆာ Intel က HTC က ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ နည်းပညာ HD Graphics
Technology_Internet Intel က Server ကို Nokia က Sony Ericsson က Qualcomm မှ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Software များ Samsung ရဲ့ Galaxy ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် processor ​​ကို OS ကို-STORE နည်းပညာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က Samsung က HD Graphics ဥပဒေရေးရာအနက် ပရိုဆက်ဆာ HTC က စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စမတ်ဖုန်းများ 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ် မိုဘိုင်းဖုန်း